Qof Kasta Dadweynaha ha Difaaco | Take Care
Bulshada Ka Hortagga Kheyraadka Tallaalka ka Baaro
Ku Turjumo af Ingiriis
Ku Turjumo af Isbaanish
Ku Turjumo af Hmong
Ha Lagu Dedaalo Caafimaadka Degmada
TALLAALKA COVID-19 OO HADDA LA HELI KARO
Si wadajir ah ayaan hal sano ka badan u soo wajahnay xaqiiqooyin adag oo ah safmarka COVID-19, oo waxa aan uga soo baxnay waa taxaddar iyo dedaal aan sameynay
Saddex tallaal oo aan dhib keeneyn, oo waxtar leh, ayaa loo hayaa dadka Minnesota. Maalin kasta, dad aad u fara badan oo ku nool Degmada Hennepin ayaa qaadanaya tallaalka.
Tallaaladaas waa wax cusub oo lagula dagaalami karo COVID-19, laakiin inta la tallaalayo dadka oo dhan waa inaan sameyno wax kasta oo xanuunka looga hortagayo – gafuurxir in la isticmaalo, in la is baaro, in guriga la joogo marka la xanuunsado iyo in dadweynaha laga fogaado.
Waa in la taxaddaro oo lagu dedaalo sidii looga badbaadin lahaa qoysaska, asxaabta, iyo dadweynaha. Marka aad heli karto tallaalka, ha ka daahin ee soo qaado.
Sida looga Taxaddaro
Taxaddar samee si aad u yareyso in aad sii faafiso xanuunka
Tallaabooyinka waxtarka leh ee ka-hortagidda
Ka-hortagidda tallaabooyinka loo raaco si wadajir ah ayey u yareeyaan khatarta uu kuugu dhacayo xanuunka adiga iyo dadka kale xataa marka tallaalka la siinayo dad badan.
Isticmaal gafuurxir mar kasta oo aad la joogto dad aan guriga kula nooleyn
Lix fiit ka fogow dadka kale ee leh kulanka ama jooga goobaha dadweynaha
Dabool qufacaaga iyo hindhisadaada
Marar badan si fiican u dhaq gacmahaaga
Isa soo baar markaad isku aragto calaamado ama aad ku dhawaato xanuunka
Guriga joog haddii aad xanuunsan tahay ama aad sugeyso jawaabta baaristaada
Marka aad isa soo tallaali karto, soo qaado tallaalka
Dadkee baa khatar ku jira?
COVID-19 midab-takoorid ma laha. Waa faayrus cusub oo degdeg u faafaya. Sidaas awgeed dadka oo dhan ayaa khatar ugu jira xanuunkan, sababtoo ah, sida caadiga ah, dadka bini’aadamka ah waxay ku xiran yihiin qoysaska iyo asxaabta.
COVID-19 wuxuu khatar weyn ku keenayaa dadka qaarkood, sida waayeelka, dadka ay hayso caafimaad-xumada, iyo dadka ay saameyso caddaalad darro dowlad ahaaneed oo ku keeneysa in ay dadku ugu liitaan caafimaadka bulshada.
Xogta COVID-19 ee lagu uruuriyo Degmada Hennepin ayaa laga helayaa warbixinta ugu dambeysa ee qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka oo dhan.
Si aad u hesho faahfaahinta sababaha asalka u ah kala-fogaanta caafimaadka dadweynaha, booqo barta intarnetka ee CDC. Haddii aad rabto qoraallo turjuman , booqo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.
Gafuurka in la daboosho, ama la isticmaalo gafuurxir, ayaa dadka ku caawin karta joojinta jeermiska u gudbi kara dadka kale. Cilmi-baaris ayaa lagu soo ogaaday in gafuurxirku yareeyo khatarta uu ku sii faafayo faayruska, gaar ahaan marka lagu daro waxyaabaha kale ee ka-hortagga ah, sida in la dhaqdo gacmaha iyo in ay lix fiit kala fogaadaan dadka aan isku guri ku nooleyn.
Marka loo eego Wareegtadii Amarka ee Guddoomiyaha Gobolka 20-81, gafuurxirku waa shuruud la iska rabo meheradaha gudahooda iyo meelaha bannaanka ah ee ay dadku wada joogaan Minnesota oo dhan.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isticmaalidda gafuurxirka iyo waxtarkiisa, fadlan booqo barta intarnetka ee Waaxda Caafimaadka Minnesota.
COVID-19 si fudud ayuu dadka ugu dhex faafi karaa qof ilaa qof, gaar ahaan marka la isugu yimaado goobaha cuntada, xafladaha, iyo goobaha lagu cibaadeysto. Si loo yareeyo khatarta infakshanka oo uusan mar kale noogu badan, waxaa dadka oo dhan lagula talinayaa in aysan marna aadin kulanka dadweynaha ee ah dadka ka baxsan qoyska wada nool. Haddii ay khasab kugu tahay kulan dadweyne, waa inaad sameyso wax kasta oo ah taxaddar, eeg waxyaabaha ka-hortaggidda ah ee kor ku qoran iyo warbixintii ugu dambeysay ee talooyinka Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.
Talooyinka dadka qaatay tallaalka
CDC ayaa dadka u haysa talooyin cusub marka ay qaataan tallaalkooda laga rabo oo dhan, oo waxaa ka mid ah in meel gudaha oo xiran ay la joogi karaan dad kale oo badan oo soo qaatay tallaalkooda oo uma baahna in ay gafuurxir isticmaalaan. Talooyinkii ugu dambeeyey ee CDC ka dadka tallaalka soo qaatay ka eego linkiga hoose.
Ma u maleyneysaa in lagu qaadsiiyey COVID-19 ama ma isku aragtay calaamadihii xanuunka? Haddii ay sidaasi jirto, waa in lagu soo baaro oo aad guriga joogto. Raadso oo akhriso faahfaahinta, baarista iyo calaamadaha COVID-19.
Qof kasta oo qaba COVID-19 kama muuqdaan calaamadaha oo dhan. Xaqiiqa ahaantii, dadka qaar ayaa laga yaabaa inaysan ka muuqan wax calaamado ah (calaamad-laaweyaal). Calaamadaha COVID-19 caadi ahaan waxay dadka ku soo baxaan 2 ilaa 14 cisho ka dib marka uu faayrusku soo gaaro. Faahfaahin dheeraad ah ka eego barta intarnetka ee Waaxda Caafimaadka Minnesota.
Calaamadaha caamka ah:
Neefta oo kugu yaraata
Dhadhanka oo la iska waayo
Urinta oo la iska waayo
Calaamadaha aan caamka ahayn ee caloosha iyo mindhicirka:
Haddii adiga ama qof ka tirsan qoyskaaga aad isku aragtaan calaamadahaas ama lagu qaadsiiyo COVID-19, hoos ka eego talooyin iyo macluumaadyo:
Ha lagu soo baaro
In la isa soo baaro waxay muhiim u tahay in laga hortago xanuunku inuu ku dhaco adiga iyo dadka kale, oo weliba baaris sahlan oo ah COVID-19 ayaa laga heli karaa Degmada Hennepin.
Haddii aad isku aragto calaamado, isla markiiba ha lagu soo baaro.
Goobo bilaash ah oo la iska soo baaro ka eego barta intarnetka ee soo socota:
Bogga intarnetka ee baarista ee Waaxda Caafimaadka Minnesota
Haddii aad ku dhawaatay dad qaba COVID-19 oo lagaa soo helo in aad qabto COVID-19, waxaa khasab kugu ah in aad guriga joogto, in aad dadka gooni ka noqoto si aadan dadka kale ugu sii faafin xanuunka
Haddii aad ku dhawaatay dad qaba COVID-19 oo ay ku qaadsiiyaan:
Sida badqabidda ugu fiican waa in aad guriga joogto (karantiilid) ah 14 cisho ka dib marka xanuunka lagu qaadsiiyo.
Haddii lagaa soo helay COVID-19:
Isku gooni yeel guriga ilaa 10 cisho ka dib marka ay calaamaduhu kugu bilowdaan, ama haddii aadan isku arkin wax calaamado ah, 10 cisho ka dib baaristaadii COVID-19. Iska hubso in aysan wax qandho ah ku qaban ugu yaraan ka hor intaadan ka soo bixin karantiilka.
Marar qaarkood, waxaa macquul ah in aad si degdeg ah uga soo baxdo karantiilka ama inaad gooni noqoto.
Karantiilidda iyo inta aad gooni u baxayso mashiinka xisaabta ayaa kugu cawin kara. Siyaabaha karantiilka ee soo socda iyo xisaabiyaha gooni u bixidda ayaa kugu caawin kara go’aaminta muddada aad guriga joogeyso
Xisaabiyaha Karantiilida/In Gooni Loo Baxo (embed link) https://covidcalculator.hennepin.us/calculator
Haddii aad qaadatay tallaalka:
Haddii aad si buuxda u qaadatay tallaalka COVID-19 ee labada jeer oo lagu qaadsiiyo xanuunka, uma baahnid in aad gasho karantiilid haddii ay jiraan waxyaabaha soo socda OO DHSAN:
In COVID-19 lagu qaadsiiyey ugu yaraan 14 cisho ka dib markaad si buuxda u qaadatay labada jeer ee tallaalka.
In COVID-19 lagu qaadsiiyey muddo ah 90 cisho gudahood markii kuugu dambeysay tallaalka labaad.
In aadan wakhtiga xaadirka ah qabin wax calaamado ah oo noqon kara COVID-19.
Talooyinka kuugu muhiimsan ee ah inaad gooni u baxdo iyo karantiilid, ka eego barta intarnetka ee Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.
Tallaal aan wax dhib ah keeni karin ayaa hadda laguu hayaa, oo in la helo iyo sida xaq loogu yeesho ayaa dadka si dhakhso ah loogu fududeynayaa si uu qof kasta u helo. Akhriso faahfaahinta ku saabsan tallaalka iyo sida lagu helo.
Tallaallada COVID-19 waa:
Tallaal kasta oo COVID-19 oo la oggolaado waxaa lagu soo saaray shuruudo adag oo isku mid ah, oo ay ku jiraan cilmi-baaris fiican iyo dad badan oo lagu soo tijaabayey.
CDC iyo FDA ayaa si buuxda ula socda soo-saarista iyo sameynta iyo tijaabinta tallaalka si loo hubiyo in xogtu sax tahay oo la soo marsiiyo shuruudaha tallaallada
Dad aqoon u leh ayaa la soconaya tallaalka badqabkiisa si ay u hubiyaan in uu sidii la filaayey tallaalku u shaqeynayo.
Tallaalada COVID-19 ee la oggolaaday oo dhan waxay yareynayaan fursad ah in aad xanuunsato ama in isbitaal lagu seexiyo.
Waxay ka kooban yihiin waxyaabo habdhiska difaaca u sheegaya in uu jirku aqoonsado faayruska COVID-19 oo dabadeedna burburiyo ka hor intaan infakshankaas lagu xunuunsan
Tallaallada la qaato hal mar ama laba jeer waxaa soo oggolaaday dowladda.
Xogta badqabidda iyo waxtarka ee tallaalka waxaa laga heli karaa barta intarnetks ee CDC.
Tallaalku waa bilaash. Wax lacag ah kuma bixineysay in lagu tallaalo, haddii aad haysato ceymiska caafimaadka ama haddii aadn haysan.
Laguma weydiin karo in aad sharci haysato iyo in kale, oo weliba macluumaadkaaga si aad u adag ayaa loo dhowrayaa.
Goorma iyo halkee baa la igu taallaali karaa?
Tallaalka wuxuu raacayaa wejiyo la isa sugayo oo qof kasta kalkiisa la gaari doono xagaaga soo socda.
Isku qor si aad u qaadato tallaalka
Is diiwaaangeli si aad ula socoto sida aad shakhsi ahaan xaq ugu leedahay iyo sida aad deegaankaaga uga heli karto tallaalka COVID-19 adigoo ka baaranaya goobaha tallaalka ee Minnesota.
Sidoo kale, waxaad isku qori kartaa Degmada Hennepin adigoo isticmaalaya linkiga hoose:
Is-qoridda Tallaalka Degmada Hennepin ee COVID-19.
Is-qoridda Degmada Henneipin kaama dhigeyso qof aan xaq u lahayn Goobaha Tallaalka ee gobolka. In la isku qoro labada meelood ee gobolka iyo degmada waxay kugu caawineyaan in aad hesho fursadda ugu horreysa ee aad ku heli karto in lagu tallaalo.
Marka aad heli karto tallaalka, fadlan soo qaado.
Macluumaadka Degmada Hennepin
Eeg oo hubso in aad xaq u leedahay iyo fursadda tallaalka COVID-19 ee deegaankaaga
Baaro goobta kuugu dhow ee baarista ah ee deegaankaaga si aad ballan u qabsato ama aad u soo qaadato jawaabtaada
Codsiga Gafuurxir Shaqaale oo Bilaash ah
Si aad Degmada Hennepin uga codsato gafuurxir maryo ah oo bilaash ah, guji halkan
Caawimaad ah caafimaadka dhimirka, cunto, guriyeyn, iyo waxyaabo kale oo badan ayaad heli kartaa.
Caawimaadda markaad ku jirto karantiilid
Haddii aad tahay qof ku nool Degmada Hennepin oo mar dhow laga helay COVID-19 oo aad u baahan tahay caawimaad la xiriirta cidlada, farriin noogu soo dir essentialservices@hennepin.com
Caawimaadda kharashka guriga
Si aad u hesho kabis ah kirada iyo kharashaadka kale ee guryaha ayaa loo hayaa dadka uu ka burburay dhaqaalahoodii intii uu socday xanuunka safmarka ah.